dhamma talk mp3 audio in myanmar by Chan Myay Sayadaw Ashin Janakabhivamsa <!-[if Webkit]> <!-[if Konq]> <!-[if Opera]> <!-[if FF]>
ChanMyay SayaDaw Ashin Janakabhivamsa
Biography of SayaDaw (Ref: http://www.chanmyay.org)
Chanmyay Sayadaw is the chief abbot of Chanmyay Yeiktha Meditationcentre, Yangon, Myanmar. His given name is Sayadaw AshinJanakabhivamsa. The Venerable Sayadaw began to study the Buddhist scriptures at the age of fifteen asaSamanera (novice monk). He received the higher ordination in 1947 and continued advanced studies of Buddhist scriptures. He practised Vipassana meditation under the instruction of the most Venerable Mahasi Sayadaw in 1953-54. Then he was invited by the State Buddha Sasana Organization to be an editor of the Buddhist scriptures in Pali(Palipatiwisodhaka) for reciting Buddhist scriptures at the Sixth Great Buddhist Council in Myanmar.
In 1957 the Venerable Sayadaw spent six years in Colombo Sri Lanka, where he continued his studies of English, Sanskrit, Hindi and Sinhalese languages. While at Colombo he took the London G.C.E. (A level) examination and passed.
In 1967 he was appointed by Venerable Mahasi Sayadaw asameditation teacher at Mahasi SasanaYeiktha, Yangon. In 1977 Sayadaw Ashin Janakabhivamsa took up residence at Chanmyay Yeiktha Meditation Center which was donated to him by some devotees and became the abbot of the center. He has been since then well known as Chanmyay Sayadaw.
He accompanied the most Ven. Mahasi Sayadaw as an assistant in Dhamma mission to Europe and USA in 1979-80. From 1981 onwards he has been undertaking Dhamma missions alone to twenty-five countries in Asia, Australia, Europe, the United States, Africa and Canada.
The Sayadaw has conducted several meditation courses all over the world and is also widely known through his talks, university lectures, broadcasts and books on Buddhism, especially meditation, including Vipassana Meditation.
******************* dhamma talks uploaded and published on2Jan 2010 ****
၁။ ကိလေသာပယ်နိုင်မှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၂။ ပဗ္ဗဇ္ဇမင်္ဂလာသာသနာပြု ကုသိုလ် တရားတော်
၃။ ရှင်ပြုအလှူ တရားတော်
၄။ ရှု၊ တည်၊ သိ၊ မငြိ ဆင်းရဲငြိမ်း တရားတော်
၅။ သမထ ဘာဝနာနှင့် ဝိပဿနာ ဘာဝနာ တရားတော်
၆။ သာသနာ့ အမွေခံ တရားတော်
၇။ သာသနာတော်အရှည်တည်တံ့ကြောင်း တရားတော်
၈။ သဘာဝလက္ခဏာနှင့် သာမညလက္ခဏာ တရားတော်
၉။ သတိပဋ္ဌာန် ဝိပဿနာ တရားတော်
၁၀။ သင်္ခါရနှင့် သင်္ခတ တရားတော်
၁။ အဖြစ်နှင့် အပျက် တရားတော် ၁၂-၁၂-၁၉၈၄
၂။ ဗုဒ္ဓ၏ အနတ္တဝါဒ တရားတော်
၃။ ပူဇော်ထိုက်သူ တရားတော် ၄-၈-၂၀၀၁
၄။ စိတ်ယဉ်ကျေးက ချမ်းသာရ တရားတော် ၁၄-၅-၁၉၉၇
၅။ ရှုမှတ်မှုမြဲလျှင် ကိလေသာစင် တရားတော်
၆။ ဆွမ်းကျိုးတုန့် ပြန် မြတ်မွေခံ တရားတော်
၇။ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၈။ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒ ဒိဋ္ဌိ၊ အန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၉။ သိက္ခာသုံးပါးဖြင့် ကိလေသာသုံးပါး ပယ်သတ်ပုံ တရားတော် ၁၄-၁၁-၁၉၉၈
၁၀။ သိ၊ ပယ်၊ ဆိုက်၊ ပွား တရားတော်
MP3 Disc 03
၁။ အကြောင်းနှင့် အကျိုး တရားတော်
၂။ အပဏ္ဏကပဋိပဒါ တရားတော်
၃။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်
၄။ အတ္တဒိဋ္ဌိနှင့် သက္ကယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၅။ ဘိက္ခုနှင့် သမဏ တရားတော် ၁၁-၄-၂၀၀၇
၆။ ဗိုလ်ငါးပါး တရားတော်
၇။ ချမ်းသာလေးပါး တရားတော်
၈။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော်
၉။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော်
၁၀။ ခန္ဓာငါးပါး တရားတော်
MP3 Disc 04
၁။ အာဇီဝဋ္ဌမကသီလ တရားတော် ၁၁-၈-၂၀၀၅
၂။ ဘယသုတ်ဒေသနာတော်နှင့် ဗုဒ္ဓနည်းကျချမ်းသာစွာနေထိုင်နည်း တရားတော်
၃။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားတော်
၄။ မေတ္တာ တရားတော် ၃၀-၈-၂၀၀၄
၅။ စိတ်ကိုဖြူစင်စေသည့် နည်းခြောက်မျိုး တရားတော်
၆။ စေတောခိလငါးပါး တရားတော်
၇။ တစပဉ္စကမ္မဋ္ဌာန်း တရားတော်
၈။ တရားဂုဏ်တော်ခြောက်ပါး တရားတော်
၉။ သမ္မဇညလေးပါး တရားတော်
၁၀။ သရဏဂုံတရားနှင့် အသေးစိတ်ရှုပုံ တရားတော်
MP3 Disc 05
၁။ ချမ်းမြေ့ မင်္ဂလာ သင်စရာ တရားတော်(၁) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈
၂။ ချမ်းမြေ့ မဂ်လာ သင်စရာ တရားတော်(၂) ၂၃-၁၁-၁၉၉၈
၃။ မေတ္တာ တရားတော်(၁)
၄။ မေတ္တာ တရားတော်(၂)
၅။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်(၁) ၁၈-၄-၁၉၉၉
၆။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်(၂) ၁၈-၄-၁၉၉၉
၇။ စိတ်ကိုထိန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၁) ၂-၁၀-၁၉၉၉
၈။ စိတ်ကိုထိန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၂) ၂-၁၀-၁၉၉၉
၉။ ယခုလုပ်ရမည့် အလုပ် တရားတော်(၁)
၁၀။ ယခုလုပ်ရမည့် အလုပ် တရားတော်(၂)
MP3 Disc 06
၁။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၁)
၂။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၂)
၃။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၃)
၄။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၄)
၅။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၅)
၆။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၆)
၇။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်း အင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၇)
MP-3 Disc 07
၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၁)
၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၂)
၃။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၃)
၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၄)
၅။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၅)
၆။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၆)
၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၇)
၈။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၈)
၉။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၉)
၁၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ၏ ကြီးပွါးချမ်းသာရေး တရားတော် (၁၀)
MP-3 Disc 08
၁။ အကောင်းလေးမျိုး တရားတော်
၂။ အားကိုးမှန်မှချမ်းသာရ တရားတော်
၃။ ဓမ္မုဒ္ဓေသလေးပါး တရားတော်
၄။ မီးလောင်အိမ်မှ ဥစ္စာရ တရားတော်
၅။ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် တရားနာရခြင်းအကျိုးငါးပါး တရားတော်
၇။ ဆဋ္ဌင်္ဂဒါန တရားတော်
၈။ သပ္ပုရိသဒါန တရားတော်
၉။ သစ္စာလေးပါး တရားတော်
၁၀။ သီလရနံ့ အရပ်တိုင်းပြန့် တရားတော်
MP-3 Disc 09
၂။ ဉာဏ်တဆယ့်ခြောက်ပါး တရားတော်
၃။ စက်လေးပါး တရားတော်
၅။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၆။ ဥပါဒါန်လေးပါး တရားတော်
၇။ ယခုလုပ်ရမည့်အလုပ် တရားတော်
၈။ ယောဂီအရည်အသွေးငါးပါး တရားတော်
၉။ ရည်စူးလှူကြ မြတ်ဒါန တရားတော်
၁၀။ ဈာန်ငါးပါးတရား တရားတော်
MP-3 Disc 10
၁။ အလှူတတ်လျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော်
၂။ သတိ တရားတော်
၃။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၄။ သပ္ပုရိသဒါနနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ တရားတော်
၅။ သိက္ခာသုံးပါး ရှင်ပြုအလှူ တရားတော်
၆။ သီလဗ္ဗတပရာမာသ တရားတော်
၇။ ဝိပဿနာ အခြေခံ တရားတော်
၈။ ဝိပဿနာ တရားတော်
၉။ ဝေဒနာ နုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၁၀။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော်
MP-3 Disc 11
၁။ ၂၃-ကြိမ်မြောက် ကထိန်အလှူ တရားတော်
၂။ အဘိဓမ္မာအကြောင်းနှင့် သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၃။ အမြတ်ဆုံးပူဇာ တရားတော်
၄။ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာဝနာ တရားတော်
၅။ မုချပြုလုပ်ရမည့် ကုသိုလ် သုံးမျိုး တရားတော်
၆။ ပုညကြိယဝတ္ထုဆယ်ပါး တရားတော်
၇။ သတိပဋ္ဌာန်အကျဉ်းချုပ် တရားတော်
၈။ ဗောဇ္ဈင် ခုနှစ်ပါး တရားတော်
၉။ ယုံကြည်မှုရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၀။ ရုပ် ၊ နာမ် သိလျှင် ဒိဋ္ဌိစင် တရားတော်
MP-3 Disc 12
၁။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်(၁) ၃၁-၈-၁၉၉၇
၂။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်(၂) ၆-၉-၁၉၉၇
၃။ ဘယသုတ် တရားတော် (၁)
၄။ ဘယသုတ် တရားတော် (၂)
၅။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော် (၁) ၂၄-၅-၂၀၀၀
၆။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော် (၂) ၂၄-၅-၂၀၀၀
၇။ နတ်တို့ ပျော်သံ တရားတော် (၁)
၈။ နတ်တို ပျော်သံ တရားတော် (၂)
၉။ ဝိပဿနာတရား နှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၁) ၉-၁၀-၂၀၀၄
၁၀။ ဝိပဿနာတရား နှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၂) ၉-၁၀-၂၀၀၄
MP-3 Disc 13
၁။ ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု တရားတော် ၂၇-၁၁-၂၀၀၇
၂။ ဉာဏ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် တရားတော် ၅-၁၀-၂၀၀၇
၃။ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာပညာရှိ ခြားနားချက် တရားတော် ၂၈-၁၁-၂၀၀၇
၄။ ဆေးဖေါ်၍သောက် ရောဂါပျောက် တရားတော်
၅။ စိတ်အေးကြည်လင် အကျိုးမြင် တရားတော် ၂၈-၄-၂၀၀၇
၆။ သားသမီးကျင့်ဝတ်ငါးပါး တရားတော် ၂၉-၈-၂၀၀၇
၇။ ဥပါဒါန်လေးပါး နှင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော် ၉-၉-၂၀၀၇
၈။ ဝါရိတ္တသီလနှင့် စာရိတ္တသီလ တရားတော် ၁၆-၇-၂၀၀၇
၉။ ဝိသုဒ္ဓိ ခုနစ်မျိုး တရားတော် ၁၉-၁၀-၂၀၀၇
၁၀။ ယောနိသောမနသိကာရ နှင့် အယောနိသော မနသိကာရ တရားတော် ၁၀-၉-၂၀၀၇
MP-3 Disc 14
၁။ စိတ် တရားတော် (၁) ၂၇-၄-၂၀၀၇
၂။ စိတ် တရားတော် (၂) ၂၇-၄-၂၀၀၇
၃။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ တရားတော် (၁) ၈-၁၂-၂၀၀၇
၄။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲ တရားတော် (၂) ၉-၁၂-၂၀၀၇
၅။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာပေါင်းပါ တရားတော် (၁) ၂၇-၉-၂၀၀၇
၆။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာပေါင်းပါ တရားတော် (၂) ၂၇-၉-၂၀၀၇
၇။ ဝေဒနာ နုပဿနာတရားတော် (၁)
၈။ ဝေဒနာ နုပဿနာတရားတော် (၂)
၉။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော် (၁)
၁၀။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော် (၂)
MP-3 Disc 15
၁။ အဘိဓမ္မာ ဒေသနာနှင့် ပဝါရဏာပွဲအကြောင်း တရားတော် ၂၈-၁၀-၂၀၀၄
၂။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၁) ၁-၁၂-၁၉၉၈
၃။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၂) ၁-၁၂-၁၉၉၈
၄။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၁)
၅။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၂)
၆။ မာရ်ငါးပါး တရားတော်(၃)
၇။ ပုဂ္ဂလသုတ်ဒေသနာတရားတော် (၁) ၁၂-၁၂-၂၀၀၇
၈။ ပုဂ္ဂလသုတ်ဒေသနာတရားတော် (၂) ၁၂-၁၂-၂၀၀၇
၉။ သမ္ပဒါလေးပါးတရားတော် (၁)
၁၀။ သမ္ပဒါလေးပါးတရားတော် (၂)
MP-3 Disc 16
၁။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၁) ၁၄-၄-၁၉၉၇
၂။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၂) ၁၅-၄-၁၉၉၇
၃။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၃) ၁၆-၄-၁၉၉၇
၄။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၄) ၁၇-၄-၁၉၉၇
၅။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၅) ၁၈-၄-၁၉၉၇
၆။ ဝိပလ္လာသ တရားတော်(၆) ၁၉-၄-၁၉၉၇
MP-3 Disc 17
၁။ စိတ်ကိုရှုက ချမ်းသာရ တရားတော်
၃။ ဘာသာရေးစံ ၊ သာသနာရေးမှတ်ကျောက် တရားတော်
၄။ ၅၂၈ သွယ် မေတ္တာတရားတော် ၃၁-၇-၁၉၉၈
၅။ ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် (၁)
၆။ ဗုဒ္ဓနေ့တရားတော် (၂)
၇။ သရဲမခြောက်တဲ့ဂါထာ တရားတော်(၁) ၁၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သရဲမခြောက်တဲ့ဂါထာ တရားတော်(၂) ၁၇-၄-၂၀၀၈
၉။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၁) သက်တော် ၈၀ ပြည့်မှာဟော ၁၀-၈-၂၀၀၈
၁၀။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် တရားတော် (၂) သက်တော် ၈၀ ပြည့်မှာဟော ၁၀-၈-၂၀၀၈
MP-3 Disc 18
၁။ မြတ်စွာဘုရား ပထမဆုံး ကပိလဝတ်ပြည် ဒေသစာရီ ကြွချီတော်မူ တရားတော် ၂၁-၃-၂၀၀၈
၂။ မြတ်စွာဘုရား ရာဟုလာအား မိန့်ကြားသော သြဝါဒ တရားတော် ၁၆-၄-၂၀၀၈
၃။ သီလသိက္ခာ တရားတော် ၂၂+၂၃-၃-၂၀၀၈
၄။ သမာဓိသိက္ခာ တရားတော် ၃၁-၃-၂၀၀၈
၅။ ပညာသိက္ခာ တရားတော်(၁) ၁-၄-၂၀၀၈
၆။ ပညာသိက္ခာတရားတော် (၂) ၄-၄-၂၀၀၈
၇။ ဘဝတန်ဘိုးတရားတော် ၁၁-၅-၂၀၀၈
၈။ ဥစ္စာလေးမျိုး တရားတော်နှင့် ကျောင်းအလှူ တရားတော် ၂-၅-၂၀၀၈
၉။ တပေါစမင်္ဂလာ တရားတော်
၁၀။ ချမ်းမြေ့ မေတ္တာပို့ အဓိပ္ပါယ် တရားတော် ၄-၈-၁၉၉၉
MP-3 Disc 19
၁။ အချိန်ရွေးမနေနှင့် တရားတော်
၂။ သုံးပါးသာသနာ သုံးပါး သိက္ခာ တရားတော်
၃။ သမာဓိသုံးမျိုး တရားတော် ၁-၂-၂၀၀၇
၄။ သြဝါဒ ပါတိမောက် တရားတော် ၃၀-၈-၂၀၀၈
၅။ ဆွမ်းအကျိုးငါးပါး တရားတော်
၆။ မောင်ရဲကျော်သူ၏ မွေးနေ့ အလှူ တရားတော်
၇။ ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူ တရားတော်(၁) ၃၀-၇-၁၉၈၉
၈။ ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှူ တရားတော်(၂) ၃၀-၇-၁၉၈၉
၉။ ကိလေသာ သုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရားတော် (၁) ၁၇-၃-၁၉၉၄
၁၀။ ကိလေသာ သုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရားတော် (၂) ၁၇-၃-၁၉၉၄
MP-3 Disc 20
၁။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၁) ၄-၁၁-၂၀၀၈
၂။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၂) ၅-၁၁-၂၀၀၈
၃။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၃) ၆-၁၁-၂၀၀၈
၄။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်း နှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော် (၄) ၉-၁၁-၂၀၀၈
၅။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါးတရားနှင့် နတ်တို့ပျော်ချိန်သုံးမျိုး တရားတော် ၂၀-၃-၂၀၀၈
၆။ ၁၃၆၉- ခုနှစ်မှ ၊ ၁၃၇၀- ပြည့်နှစ်သို့ နှစ်သစ်မင်္ဂလာသဝဏ်လွှာ တရားတော် ၅-၄-၂၀၀၈
၇။ ကိုယ်ကျင့်တရား မည်သည့်အခါမျှ မချွတ်ယွင်းပါစေနှင့် တရားတော် ၇-၄-၂၀၀၈
၈။ သူတော်ကောင်းလက္ခဏာနှင့် သူယုတ်မာလက္ခဏာ တရားတော် ၂၈-၉-၂၀၀၈
၉။ မုချ ပြုလုပ်ရမည့် ကောင်းမှုကုသိုလ်အကျယ်ဆယ်မျိုး တရားတော် ၂၉-၁၀-၂၀၀၈
၁၀။ သာသနာ့ရဲဘော် တရားတော် ၈-၄-၁၉၉၈
MP-3 Disc 21
၁။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၁) ၁၃-၄-၁၉၉၃
၂။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၂) ၁၄-၄-၁၉၉၃
၃။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၃) ၁၅-၄-၁၉၉၃
၄။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၄)
၅။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၅)
၆။ သလ္လသုတ်ဒေသနာ (ဆူး) တရားတော် (၆)
MP-3 Disc 22
၁။ စိတ်တရားတော် (၁)
၂။ စိတ်တရားတော် (၂)
၃။ စိတ်တရားတော် (၃)
၄။ စိတ်တရားတော် (၄)
၅။ စိတ်တရားတော် (၅)
၆။ စိတ်တရားတော် (၆)
၇။ စိတ်တရားတော် (၇)
၈။ စိတ်တရားတော် (၈)
၉။ စိတ်တရားတော် (၉)
၁၀။ စိတ်တရားတော် (၁၀)
၁၁။ စိတ်တရားတော် (၁၁)
၁၂။ စိတ်တရားတော် (၁၂)
၁၃။ စိတ်တရားတော် (၁၃)
၁၄။ စိတ်တရားတော် (၁၄)
၁၅။ စိတ်တရားတော် (၁၅)
၁၆။ စိတ်တရားတော် (၁၆)
၁၉၈၄ ဇူလိုင်လမှ ၁၉၈၅ ဇန်နဝါရီလ အတွင်း
၁၇။ စိတ်တရားတော် (၁၇)
၁၈။ စိတ်တရားတော် (၁၈)
၁၉။ စိတ်တရားတော် (၁၉)
၂၀။ စိတ်တရားတော် (၂၀)
၂၁။ စိတ်တရားတော် (၂၁)
၂၂။ စိတ်တရားတော် (၂၂)
၂၃။ စိတ်တရားတော် (၂၃)
၂၄။ စိတ်တရားတော် (၂၄)
၂၅။ စိတ်တရားတော် (၂၅)
၂၆။ စိတ်တရားတော် (၂၆)
၂၇။ စိတ်တရားတော် (၂၇)
၂၈။ စိတ်တရားတော် (၂၈)
၂၉။ စိတ်တရားတော် (၂၉)
၃၀။ စိတ်တရားတော် (၃၀)
၃၁။ စိတ်တရားတော် (၃၁)
၃၂။ စိတ်တရားတော် (၃၂)
၃၃။ စိတ်တရားတော် (၃၃)
၃၄။ စိတ်တရားတော် (၃၄)
၃၅။ စိတ်တရားတော် (၃၅)
၃၆။ စိတ်တရားတော် (၃၆)
၃၇။ စိတ်တရားတော် (၃၇)
၃၈။ စိတ်တရားတော် (၃၈)
၃၉။ စိတ်တရားတော် (၃၉)
၄၀။ စိတ်တရားတော် (၄၀)
၄၁။ စိတ်တရားတော် (၄၁)
၄၂။ စိတ်တရားတော် (၄၂)
၄၃။ စိတ်တရားတော် (၄၃)
၄၄။ စိတ်တရားတော် (၄၄)
၄၅။ စိတ်တရားတော် (၄၅)
၄၆။ စိတ်တရားတော် (၄၆)
၄၇။ စိတ်တရားတော် (၄၇)
၄၈။ စိတ်တရားတော် (၄၈)
၄၉။ စိတ်တရားတော် (၄၉)
၅၀။ စိတ်တရားတော် (၅၀)
၅၁။ စိတ်တရားတော် (၅၁)
၅၂။ စိတ်တရားတော် (၅၂)
၅၃။ စိတ်တရားတော် (၅၃)
၅၄။ စိတ်တရားတော် (၅၄)
၅၅။ စိတ်တရားတော် (၅၅)
၅၆။ စိတ်တရားတော် (၅၆)
၅၇။ စိတ်တရားတော် (၅၇)
****dhamma talks uploaded and published on 27 Aug 2010 ****
၁။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် တရားတော်(၁)
၂။ ကုသိုလ် အကုသိုလ် တရားတော်(၂)
၃။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ၊ အတ္တဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၄။ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ တရားတော် (၁)
၅။ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ တရားတော် (၂)
၆။ မီးလောင်အိမ်မှ ဥစ္စာရ တရားတော်
၇။ ဆဠင်္ဂဒါန တရားတော်
၉။ စေတောခိလ(၅)ပါး တရားတော်
၁၀။ အသိမြင်မှန်မှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၁။ သိ၊ ပယ်၊ ဆိုက်၊ ပွား တရားတော်
၁၂။ ဗုဒ္ဓနည်းကျ ချမ်းသာစွာ နေထိုင်နည်း တရားတော်
၁၃။ အဖြစ်နှင့် အပျက် တရားတော်
၁၄။ ဗုဒ္ဓ၏ အနတ္တဝါဒ တရားတော်
၁၅။ ပူဇော်ထိုက်သူ တရားတော်
၁၆။ စိတ်ယဉ်ကျေးက ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၇။ ရှုမှတ်မှုမြဲလျှင် ကိလေသာစင် တရားတော်
၁၈။ ဆွမ်းကျိုးတုန့်ပြန် မြတ်မွေခံ တရားတော်
၁၉။ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၂၀။ သဿတဒိဋ္ဌိ၊ ဥစ္ဆေဒဒိဋ္ဌိ၊ အန္တရာဘဝဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၂၁။ သိက္ခာသုံးပါးဖြင့် ကိလေသာသုံးပါးပယ်သတ်ပုံ တရားတော်
၂၂။ သိ၊ ပယ်၊ ဆိုက်၊ ပွား တရားတော်
၂၃။ အကြောင်းနှင့် အကျိုး တရားတော်
၂၄။ အပဏ္ဏကပဋိပဒါ တရားတော်
၂၅။ အတ္တခြောက်မျိုး တရားတော်
၂၆။ အတ္တဒိဋ္ဌိနှင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၂၇။ ဘိက္ခုနှင့် သမဏ တရားတော်
၂၈။ ဗိုလ်ငါးပါး တရားတော်
၂၉။ ချမ်းသာလေးပါး တရားတော်
၃၀။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော်
၃၁။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော်
၃၂။ ခန္ဓာငါးပါး တရားတော်
၃၃။ အာဇီဝဌမကသီလ တရားတော်
၃၄။ ဘယသုတ် ဒေသနာတော်နှင့် ဗုဒ္ဓနည်းကျ ချမ်းသာစွာနေထိုင်နည်း
၃၅။ မြတ်စွာဘုရား၏ အဆုံးအမ တရားတော်
၃၆။ မေတ္တာ တရားတော်
၃၇။ စိတ်ကိုဖြူစင်စေနည်းခြောက်မျိုး တရားတော်
၃၈။ စေတောခိလငါးပါး တရားတော်
၃၉။ တစပဉ္စက ကမ္မဋ္ဌာန်း တရားတော်
၄၀။ တရာဂုဏ်တော်ခြောက်ပါး တရားတော်
၄၁။ သမ္ပဇညလေးပါး တရားတော်
၄၂။ သရဏဂုဏ်တရားနှင့် အသေးစိတ်ရှုပုံ
၄၃။ ချမ်းမြေ့မင်္ဂလာ သင်စရာ(၁)
၄၄။ ချမ်းမြေ့မင်္ဂလာ သင်စရာ(၂)
၄၅။ မေတ္တာ တရားတော်(၁)
၄၆။ မေတ္တာ တရားတော်(၂)
၄၇။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်(၁)
၄၈။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျုး တရားတော်(၂)
၄၉။ စိတ်ကိုထိန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၁)
၅၀။ စိတ်ကိုထန်းမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၂)
၅၁။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၁)
၅၂။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၂)
၅၃။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၃)
၅၄။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၄)
၅၅။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၅)
၅၆။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၆)
၅၇။ ဣန္ဒြေငါးပါး အားကောင်းကြောင်းအင်္ဂါကိုးပါး တရားတော် (၇)
၅၈။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၁)
၅၉။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၂)
၆၀။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၃)
၆၁။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၄)
၆၂။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၅)
၆၃။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၆)
၆၄။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၇)
၆၅။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၈)
၆၆။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၉)
၆၇။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရာ၏ ကြီးပွားချမ်းသာရေး တရားတော် (၁၀)
၆၈။ အကောင်းလေးမျိုး တရားတော်
၆၉။ အားကိုးမှန်မှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၇၀။ ဓမ္မုဒ္ဓေသလေးပါး တရားတော်
၇၁။ မီးလောင်အိမ်မှ ဥစ္စာရ တရားတော်
၇၂။ မင်္ဂလာတရားတော်နှင့် တရားနာရခြင်း အကျိုးငါးပါး တရားတော်
၇၃။ ပုဂ္ဂိုလ်လေးမျိုး တရားတော်
၇၄။ ဆဠင်္ဂဒါန တရားတော်
၇၅။ သပ္ပုရိသဒါန တရားတော်
၇၆။ သစ္စာလေးပါး တရားတော်
၇၇။ သီလရနံ့ အရပ်တိုင်းပျံ့ တရားတော်
၇၈။ ဒါန တရားတော်
၇၉။ ဉာဏ်တဆယ့်လေးပါး တရားတော်
၈၀။ စက်လေးပါး တရားတော်
၈၁။ သိက္ခာသုံးပါး တရားတော်
၈၂။ သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၈၃။ ဥပါဒွန်လေးပါး တရားတော်
၈၄။ ယခုလုပ်ရမည့် အလုပ် တရားတော်
၈၅။ ယောဂီအရည်အသွေးငါးပါး တရားတော်
၈၆။ ရည်စူးလှုက မြတ်ဒါန တရားတော်
၈၇။ အလှုတတ်လျှင် နိဗ္ဗာန်ဝင် တရားတော်
၈၉။ သက္ကာယဒိဠိ တရားတော်
၉၀။ သပ္ပုရိသ ဒါနနှင့် ဥပါဒါနက္ခန္ဓာ တရားတော်
၉၁။ သိက္ခာသုံးပါး ရှင်ပြုအလှု တရားတော်
၉၂။ သီလဗ္ဗတပရာမာသ တရားတော်
၉၃။ ဝိပဿနာအခြေခံ တရားတော်
၉၄။ ဝိပဿနာ တရားတော်
၉၅။ (၂၃)ကြိမ်မြောက် ကထိန် အလှု
၉၆။ အဘိဓမ္မာအကြောင်းနှင့် သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၉၈။ ဒါန၊ သီလဓ ဘာဝနာ တရားတော်
၉၉။ မုချပြုလုပ်ရမည့် ကုသိုလ်သုံးမျိုး တရားတော်
၁၀၀။ ပုညကြိယဝတ္ထုဆယ်ပါး တရားတော်
၁၀၁။ သတိပဋ္ဌာန် အကျဉ်းချုပ် တရားတော်
၁၀၂။ ဗောဇ္ဈင် ခုနှစ်ပါး တရားတော်
၁၀၃။ ယုံကြည်မှုရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၀၄။ ရုပ်၊ နာမ် သ်လျှင် ဒိဋ္ဌိစင် တရားတော်
၁၀၅။ အတ္တ (၆)မျိုး တရားတော် (၁)
၁၀၆။ အတ္တ (၆)မျိုး တရားတော် (၂)
၁၀၇။ ဘယသုတ် တရားတော် (၁)
၁၀၈။ ဘယသုတ် တရားတော် (၂)
၁၀၉။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော် (၁)
၁၁၀။ ဣန္ဒြေငါးပါး တရားတော် (၂)
၁၁၁။ နတ်တို့ပျော်သံ တရားတော် (၁)
၁၁၂။ နတ်တို့ပျော်သံ တရားတော် (၂)
၁၁၃။ ဝိပဿနာတရားနှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၁)
၁၁၄။ ဝိပဿနာတရားနှင့် ယောဂီအင်္ဂါငါးပါး တရားတော် (၂)
၁၁၅။ ကောင်းမှုနှင့် မကောင်းမှု တရားတော်
၁၁၆။ ဏာဏ်စဉ် အကျဉ်းချုပ် တရားတော်
၁၁၇။ လူမိုက်နှင့် လူလိမ္မာ ပညာရှိ ခြားနားချက် တရားတော်
၁၁၈။ ဆေးဖေါ်၍ သောက် ရောဂါပျောက် တရားတော်
၁၁၉။ စိတ်အေးကြည်လင် အကျိုးမြင် တရားတော်
၁၂၀။ သားသမီးကျင့်ဝတ် ငါးပါး တရားတော်
၁၂၁။ ဥပါဒါန် လေးပါးနှင့် သက္ကာယဒိဋ္ဌိ တရားတော်
၁၂၂။ ဝါရိတ္တသီလနှင့် စာရိတ္တသီလ တရားတော်
၁၂၃။ ဝိသုဒ္ဓိ ခုနှစ်မျိုး တရားတော်
၁၂၄။ ယောနိသော မနသိကာရနှင့် အယောသိက မနသိကာရ တရားတော်
၁၂၅။ စိတ် တရားတော်(၁)
၁၂၆။ စိတ် တရားတော်(၂)
၁၂၇။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ တရားတော် (၁)
၁၂၈။ တရားအားထုတ်တာ ရည်ရွယ်ချက်က ဘာလဲ တရားတော် (၂)
၁၂၉။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာ ပေါင်းသင်းပါ တရားတော် (၁)
၁၃၀။ သူတော်ကောင်းနှင့်သာ ပေါင်းသင်းပါ တရားတော် (၂)
၁၃၁။ ဝေဒနာနုပဿနာ တရားတော် (၁)
၁၃၂။ ဝေဒနာနုပဿနာ တရားတော် (၂)
၁၃၃။ အဘိဓမ္မာဒေသနာနှင့် ပဝါရဏာပွဲအကြောင်း
၁၃၄။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၁)
၁၃၅။ အပဏ္ဏက ပဋိပဒါ တရားတော်(၂)
၁၃၆။ မာရ်ငါးပါး တရားတော် (၁)
၁၃၇။ မာရ်ငါးပါး တရားတော် (၂)
၁၃၈။ မာရ်ငါးပါး တရားတော် (၃)
၁၃၉။ ပုဂ္ဂလသုတ် ဒေသနာတော် (၁)
၁၄၀။ ပုဂ္ဂလသုတ် ဒေသနာတော် (၂)
၁၄၁။ သမ္ပဒါလေးပါး တရားတော် (၁)
၁၄၂။ သမ္ပဒါလေးပါး တရားတော် (၂)
၁၄၃။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၁)
၁၄၄။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၂)
၁၄၅။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၃)
၁၄၆။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၄)
၁၄၇။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၅)
၁၄၈။ ဝိပလ္လာသ တရားတော် (၆)
၁၄၉။ စိတ်ကိုရှုက ချမ်းသာရ တရားတော်
၁၅၀။ ပဟာန်ငါးပါး တရားတော်
၁၅၁။ ဘာသာရေးစံသာသနာမှတ်ကျောက် တရားတော်
၁၅၂။ (၅၂၈)သွယ် မေတ္တာ တရားတော်
၁၅၃။ ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် (၁)
၁၅၄။ ဗုဒ္ဓနေ့ တရားတော် (၂)
၁၅၅။ သရဲမခြောက်တဲ့ဂါထာ တရားတော် (၁)
၁၅၆။ သရဲမခြောက်တဲ့ဂါထာ တရားတော် (၂)
၁၅၇။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် (သက်တော် ၈၀ပြည့်ဟော) တရားတော် (၁)
၁၅၈။ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ် (သက်တော် ၈၀ပြည့်ဟော) တရားတော် (၂)
၁၅၉။ မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံး ကပိလဝတ် ဒေသစာရီကြွချီတော်မူ တရားတော်
၁၆၀။ မြတ်စွာဘုရား ရာဟုလာအား မိန့်ကြားသော သြဝါဒ တရားတော်
၁၆၁။ သီလ သိက္ခာ တရားတော်
၁၆၂။ သမာဓိ သိက္ခာ တရားတော်
၁၆၃။ ပညာသိက္ခာ တရားတော်(၁)
၁၆၄။ ပညာသိက္ခာ တရားတော်(၂)
၁၆၅။ ဘဝတန်ဘိုး တရားတော်
၁၆၆။ ဥစ္စာလေးမျိုး တရားတော်နှင့် ကျောင်းအလှု
၁၆၇။ တပေါစ မင်္ဂလာ တရားတော်
၁၆၈။ ချမ်းမြေ့ မေတ္တာပို့ အဓပ္ပါယ် တရားတော်
၁၆၉။ အချိန်ရွေး နှေးမနေနှင့် တရားတော်
၁၇၀။ သုံးပါးသာသနာ သုံးပါသိက္ခာ တရားတော်
၁၇၁။ သမာဓိ သုံးမျိုး တရားတော်
၁၇၂။ သြဝါဒ ပါတိမောက် တရားတော်
၁၇၃။ ဆွမ်းအကျိုး ငါးပါး တရားတော်
၁၇၄။ မောင်ရဲကျော်သူ၏ မွေနေ့အလှု တရားတော်
၁၇၅။ ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှု တရာေးတာ်(၁)
၁၇၆။ ဝါဆိုသင်္ကန်းအလှု တရာေးတာ်(၂)
၁၇၇။ ကိလေသာသုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရာေးတာ်(၁)
၁၇၈။ ကိလေသာသုံးဖြာ သိက္ခာသုံးပါး တရာေးတာ်(၂)
၁၇၉။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပါးနှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော်(၁)
၁၈၀။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပါးနှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော်(၂)
၁၈၁။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပါးနှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော်(၃)
၁၈၂။ သမထ ကမ္မဋ္ဌာန်းလေးပါးနှင့် ဝိပဿနာဘာဝနာ တရားတော်(၄)
၁၈၃။ (၁၃၇၀) ပြည့်နှစ် နှစ်သစ်မင်္ဂလာ သဝစ်လွှာ တရားတော်
၁၈၄။ သတိပဋ္ဌာန်လေးပါနှင့် နတ်တို့ပျော်ချိန်သုံးမျိုး တရားတော်
၁၈၅။ ကိုယ်ကျင့်တရားမည်သည့်အခါမျှ မချွတ်ယွင်းပါစေနှင့် တရားတော်
၁၈၆။ သူတော်ကောင်း လက္ခဏာနှင့် သူယုတ်မာလက္ခဏာ တရားတော်
၁၈၇။ မုချပြုလုပ်ရမည့် ကောင်းမှုကုသိုလ် အကျယ် ဆယ်မျိုး တရားတော်
၁၈၈။ သာသနာ့ရဲဘော် တရားတော်
၁၈၉။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၁)
၁၉၀။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၂)
၁၉၁။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၃)
၁၉၂။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၄)
၁၉၃။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၅)
၁၉၄။ သလ္လသုတ် ဒေသနာတော် တရားတော်(၆)
၁၉၅။ စုန္ဒသုတ် တရားတော်(၁)
၁၉၆။ စုန္ဒသုတ် တရားတော်(၂)
၁၉၇။ စုန္ဒသုတ် တရားတော်(၃)
၁၉၈။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၁)
၁၉၉။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၂)
၂၀၀။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၃)
၂၀၁။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၄)
၂၀၂။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၅)
၂၀၃။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၆)
၂၀၄။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၇)
၂၀၅။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၈)
၂၀၆။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၉)
၂၀၇။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၁၀)
၂၀၈။ ဓမ္မစြင်္ကာ တရားတော် (၁၁)
၂၀၉။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၁)
၂၁၀။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၂)
၂၁၁။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၃)
၂၁၂။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၄)
၂၁၃။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၅)
၂၁၄။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၆)
၂၁၅။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၇)
၂၁၆။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၈)
၂၁၇။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၉)
၂၁၈။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၁၀)
၂၁၉။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၁၁)
၂၂၀။ ကင်္ခါဝိတရဏ ဝိသုဒ္ဓိ တရားတော် (၁၂)
၂၂၁။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် တရားတော် (၁)
၂၂၂။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် တရားတော် (၂)
၂၂၃။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် တရားတော် (၃)
၂၂၄။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် တရားတော် (၄)
၂၂၅။ ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ် တရားတော် (၅)
၂၂၆။ စိတ်ကောင်းရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၁)
၂၂၇။ စိတ်ကောင်းရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၂)
၂၂၈။ စိတ်ကောင်းရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၃)
၂၂၉။ စိတ်ကောင်းရှိမှ ချမ်းသာရ တရားတော်(၄)
၂၃၀။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁)
၂၃၁။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂)
၂၃၂။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၃)
၂၃၃။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၄)
၂၃၄။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၅)
၂၃၅။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၆)
၂၃၆။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၇)
၂၃၇။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၈)
၂၃၈။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၉)
၂၃၉။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၀)
၂၄၀။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၁)
၂၄၁။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၂)
၂၄၂။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၃)
၂၄၃။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၄)
၂၄၄။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၅)
၂၄၅။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၆)
၂၄၆။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၇)
၂၄၇။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၈)
၂၄၈။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁၉)
၂၄၉။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၀)
၂၅၀။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၁)
၂၅၁။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၂)
၂၅၂။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၃)
၂၅၃။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၄)
၂၅၄။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၅)
၂၅၅။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂၆)
၂၅၆။ ကံတမလွန်ဘဝ တရားတော်
၂၅၇။ စိတ် တရားတော်(၁)
၂၅၈။ စိတ် တရားတော်(၂)
၂၅၉။ စိတ် တရားတော်(၃)
၂၆၀။ စိတ် တရားတော်(၄)
၂၆၁။ စိတ် တရားတော်(၅)
၂၆၂။ စိတ် တရားတော်(၆)
၂၆၃။ စိတ် တရားတော်(၇)
၂၆၄။ စိတ် တရားတော်(၈)
၂၆၅။ စိတ် တရားတော်(၉)
၂၆၆။ စိတ် တရားတော်(၁၀)
၂၆၇။ စိတ် တရားတော်(၁၁)
၂၆၈။ စိတ် တရားတော်(၁၂)
၂၆၉။ စိတ် တရားတော်(၁၃)
၂၇၀။ စိတ် တရားတော်(၁၄)
၂၇၁။ စိတ် တရားတော်(၁၅)
၂၇၂။ စိတ် တရားတော်(၁၆)
၂၇၃။ ယခုလုပ်ရမည့်အလုပ် တရားတော်(၁)
၂၇၄။ ယခုလုပ်ရမည့်အလုပ် တရားတော်(၂)
၂၇၅။ ဝေဒနာနုပဿနာ သတိပဋ္ဌာန် တရားတော်
၂၇၆။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရာေးတာ်(၁)
၂၇၇။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရာေးတာ်(၂)
၂၇၈။ ဘာကြောင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသလဲ တရားတော်
၂၇၉။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၁)
၂၈၀။ စိတ်ထားဖြူဖွေး ချမ်းသာရေး တရားတော်(၂)
၂၈၁။ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ရေး တရားတော်
282/ Vipassana Meditation (1)
283/ Vipassana Meditation (2)
284/ Vipassana Meditation (3)
285/ Vipassana Meditation (4)
286/ Vipassana Meditation (5)
287/ Vipassana Meditation (6)
288/ Vipassana Meditation (7)
289/ Vipassana Meditation (8)
290/ Vipassana Meditation (9)
291/ Vipassana Meditation (10)
292/ Vipassana Meditation (11)
293/ Vipassana Meditation (12)
294/ Vipassana Meditation (13)
295/ Vipassana Meditation (14)
296/ Vipassana Meditation (15)
297/ Vipassana Meditation (16)
298/ Vipassana Meditation (17)
299/ Vipassana Meditation (18)
300/ Vipassana Meditation (19)
301/ Vipassana Meditation (20)
302/ Vipassana Meditation (21)
303/ Vipassana Meditation (22)
304/ Vipassana Meditation (23)
305/ Vipassana Meditation (24)
306/ Vipassana Meditation (25)
307/ Vipassana Meditation (26)
308/ Vipassana Meditation (27)
309/ Vipassana Meditation (28)
ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၁) ၁၅-၄-၁၉၉၅ ညနေ ၄ နာရီ
ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၂) ၁၆-၄-၁၉၉၅ ညနေ ၄ နာရီ
ဒါရုက္ခန္ဓောပမသုတ္တန် (၃) ၁၇-၄-၁၉၉၅ ညနေ ၄ နာရီ